မြစ်ကြီးနားမြို့ ဆွမ်ပရာဘွမ်လမ်းမကြီး (တပ်ကုန်းရပ်ကွက်)အတိုင်း စာလုပ်ပြီး ဆိုင်ကယ်ဖြင့်ပြန်လာသည့် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား နှစ်ဦးအား လူ ၆ဦးမှ တားကာ ဓားဖြင့်ခုတ်သဖြင့် နှစ်ဦးထဲမှ တစ်ဦးမှာ မျက်နှာ၊ ဦးခေါင်း နှင့် လက်တို့တွင် ဒဏ်ရာရရှိကာ မြစ်ကြီးနားဆေးရုံကြီး၌ ဆေးကုသခံယူလျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဓားဖြင့်ခုတ်ခံရသည့် မောင်အောင်လမှာ သချာင်္ဒုတိယနှစ် (မဟာတန်း)တက်နေသူဖြစ်ပြီး ဘွဲ့လွန်စာတမ်းပြုစု ရန်အတွက် ယမန်နေ့ မတ်လ ၂၈ရက်နေ့ည ၁၁နာရီဝန်းကျင်၌ အိမ်သို့အပြန်တွင် ဆိုင်ကယ် ၃စီး စီးလာသည့် လူ ၆ဦးမှ လမ်းပိတ်တားကာ ၄င်း၏ဆိုင်ကယ် နှင့် ဖုန်းအား လုယူလိုက်သည်။
” ဆရာမအိမ်က စာလုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့လမ်းမှာ ပိတ်တားလိုက်တော့ ကျွန်တော်လည်း ထွက်ပြေးလို့မရတော့ဘူး” ဟု အောင်လမှဆိုသည်။
ထိုသို့လုယူလိုက်ပြီးနောက်တွင် ထို၆ဦးမှ ဓားဖြင့် ခုတ်လိုက်ရာ အောင်လသူငယ်ချင်းမှာ တိမ်းရှောင်လိုက်သဖြင့် မထိပဲ အောင်လတွင် ထိခိုက်ကာ မျက်နှာ နှင့် ဦးခေါင်း၊လက်တို့၌ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ကျန်တစ်ဦးမှာ မူ ဒဏ်ရာရရှိခြင်းမရှိပဲထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။
ထိုသို့ လုယက် ရိုက်နှက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်လဂျွန်ငန်ဆိုင်း ၏ ကိုယ်ရေးအ ရာရှိဖြစ်သည့် နောင်တိန်မှာ လည်း ဆွမ်ပရာဘွမ်လမ်းမကြီး တပ်ကုန်းရပ်ကွက် စင်သီယာတည်းခိုခန်း လမ်းကြားအရောက် တွင် လူအုပ်စုတစ်စုမှ ငွေညှစ်တောင်းကာ နောင်တိန်အား ယမန်နေ့ညတွင် ရိုက်နှက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်တွင် ထိုကဲ့သို့ ပစ္စည်းလု၊ ရိုက်နှက်မှု များ မကြာခဏဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသည်။
ပုံ။။။မြစ်ကြီးနားပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေသည့် အောင်လ
Previous: (၅) နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း။
Next: ကျောက်မျက် ဥပဒေအချို့ပြင်ဆင်ရန် ဖားကန့်ဒေသခံ ၅၀၀ကျော် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
54 thoughts on “မြစ်ကြီးနားတွင် လုယက်မှုမကြာခဏဖြစ်ပွားနေ”
Coping with the disorder DSM IV has been refered as the bible of psychiatric diagnosis as it provides the characteristics of mental disorders and how they can be coped up. Insula precio levitra5mg Wellcichened buy accutane uk online
Vente Kamagra Cameroun Cgfhct Prednisone
Zdphln Propecia Covered By Insurance Hair Loss hydroxychloroquine price per pill Bndgrw
Bhirgo Plaquenil Rmyvpw Among the numerous precautions needed were anticoagulants to prevent the blood from clotting as it passed through the tubes and mechanical pump.
Доступ смотреть сквозь.
cvjnhtnm abkmvs jykfqy says:
Фильмы, Смотреть Онлайн.. Здесь cvjnhtnm abkmvs jykfqy.
Кино — Смотреть онлайн: Фильм.. Здесь Бэтмен (2022) смотреть онлайн.